Creative Writing » အသစ်လည်း မဟုတ် အဟောင်းလည်း မဟုတ်တဲ့ ဒေါ်ဟေသီ	36
ဦးကျောက်ခဲ says: လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျား…
ဟေသီ says: ကျွန်မကလည်း နဂိုတည်းက အငြင်းသန်တယ်။ အခု ရှေ့နေဖြစ်တော့ တစ်ပတ် တစ်ခါလောက် ဆရာနဲ့ ငြင်းနေရတယ်။ စိတ်မဆိုးဘဲ နဲ့ကို ငြင်းတာပါဗျို့။
@QUIL@ says: တခုလောက်မေးလို့ရမလားဗျ…
ဟေသီ says: သိပ်တော့ အကျွမ်းကျင်တော့ မဟုတ်သေးဘူးနော် သိသလောက် မှတ်သလောက် ဖြေပေးရမှာပေါ့ မေးပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
@QUIL@ says: ဂလိုဗျ
ဇီဇီခင်ဇော် says: Welcome back, sis..!!
တောင်ပေါ်သား says: ရှေ့နေဆိုပါလား
ပြိုင်ငြင်းလို့နိူင်မယ် မထင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 63
ဟေသီ says: ကြိုဆိုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မဇီဇီရှင့်။ ကိုတောင်ပေါ်သားရယ် ကျွန်မက မမြဲခြင်း တရားကို လက်ကိုင်ထားပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ နိုင်အောင် မငြင်းနိုင်ပါဘူး နောက်ပြီး ကျွန်မကပဲ အမြဲ မမှန်နိုင်ဘူး ဆိုတာကိုပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: ယူအက်စ်မှာ.. မြန်မာဆရာဝန်..အဂျင်နီယာတွေများသလောက်.. မြန်မာရှေ့နေအင်မတန်ရှားတယ်..။
မသိတာမေး.. သိတာမြန်မာလို ပြန်ဖို့တောင်းဆိုမယ်နော… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 63
ဟေသီ says: ဟတ်ကဲ့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိပါ၏ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -စာရေးချင်စိတ်ရှိသူတစ်ယောက် စာရေးတော့မယ်လို့ ပြောလာရင်
-စာဖတ်ရတော့မယ်လို့ တွေးပြီး ၀မ်းသာမိပါတယ် -များများရေးပါဗျာ။
ဟေသီ says: ကြိုးစားရှေ့ဆက်သွားပါ့မည်….
လုံမလေးမွန်မွန် says: အင်.. ဂလောက် စာရေးကောင်းတာကို… ဖတ်ရတာလေးများ ချောလို့…
ဒီနာမည်ကို အပြင်မှာ မြင်ဖူးတယ်.. မဟေသီ ဆိုတော့ မဟေသီ မဟုတ်ဘူး…မ ဟေသီ တဲ့.. ဘယ်မှာသိတာလည်းလို့ ပြန်စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်.. Warmly Welcome to MG!
ဟေသီ says: ဟယ် ဂယ်ကြီးလား နာမည်ကတော့ ခုမှ ပြန်ပြောင်းလိုက်တာ မွန်မွန်ရေ… အရင်က တခြားနာမည်ပါ။ ကြိုဆိုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါရှင့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11632
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်တို့လည်း အရင်က သူများစာတွေလိုက်ဖတ်ပါတယ်
ဟေသီ says: ဟုတ်ကဲ့ အခုလို ကြိုဆိုပေးကြတာ အတိုင်းထက် အလွန် ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ဖြစ်မိပါတယ် ရှင်
မြစပဲရိုး says: . လော်ပို့စ် မှာ ဝင်ပြီး အားပေးထားလို့ ကျေးဇူးပါ ဟေသီ ရေ။
padonmar says: စာရေးလည်း ကောင်း၊တရားရေးဆိုင်ရာပါလာရင် ပညာရှင်ရှိတဲ့အတွက် အခိုင်အမာ သိရမှာမို့ အိုးစည်ဗုံမောင်းနဲ့ ကြိုပါတယ်။
Courage says: ငင့်… ၄နှစ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ထက်တောင် ရွာနေသက်တန်းက ပိုကြီးတော့ ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့။ ဂျူနီယာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်က “တွေ့ရတာ ၀မ်သာပါတယ် မဟေသီ” လို့ပဲ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေ။
kai says: မဟေသီဖြစ်သွားပါလေရော..။ မိဘုရားလိုလို…။
နောက်တာနော..။ ကောင်းပါလေ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: သူကြီးးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12062
Alinsett @ Maung Thura says: ရွာမှာ ကြာကြာ နေမနေ
Ma Ma says: စာကိုဖတ်ပြီး ရေးသူရဲ့ အသက်ကို မှန်းလို့ရတယ်….. လို့ မပြောပါဘူး။
ကြိုဆိုပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 154
HMM says: အားပေးရမဲ့ စာရေးသူတစ်ယောက် တိုးပြန်လေပြီ
လာမဲ့ မျက်စိဖြစ် နားဖြစ် ရေနွေးဖြစ်လေးများကို စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ဇီဇီခင်ဇော် says: ညင်းညင်းးး
HMM says: စောင့်ဖမ်းနေတာလားဝေ့ သိလိုက်ဘူး ဂလိုမှန်းသိ ပုန်းပါတယ်
ဦးကြောင်ကြီး says: ဟေသီဂလေး
ဦးကြောင်ကြီး says: ဟုတ်မှ မလွဲရော… ဖွလိုက်မဲ… နီ့အဖေ ငှာသိတယ်။ ကြောင်က္ခထီး xxx ဆိုဒါ ငှာပေးထားတဲ့ နှံမြည်
ဦးကျောက်ခဲ says: ကြောင်နှာဂျီးပြောတာ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့…
သာမီးရှောင်ရမှာ အဲ့ ကြောင်ဏှာပဲ… ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: မေးပြီးကြောင်း … ခီများထင်တဲ့သူမဟုတ်…
အပေါ်က ကြောင်ဏှာဂျီးဂိုဒေါ့ သတိထားပါ သာမီးရေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: အနော်ဘာပေါမိလို့လဲဂျာ… အူးအူးကျော် လူမှားနေဗီ…
YE YINT HLAING says: စိတ်ဝင်စားဖွယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရေးမယ်ဆိုလို့ ဒီက စောင့်မျှော်နေပါ့မယ် ဟေ ။ ဟဲဟဲ…
အောင် မိုးသူ says: ဝမ်းမလီးဝဲကမ်းပါ
aye.kk says: ဟေသီ
ဟေသီ says: ဟုတ်ကဲ့ ကြိုဆိုကြသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .၀မ်းမလီးဝဲလ်ကမ်းပါဗျ